« Kaly Kalo Gasy » : hiaka-tsehatra ry Kala Vazo | NewsMada
« Kaly Kalo Gasy » : hiaka-tsehatra ry Kala Vazo
Ela niandrasana ny mpitia zavakanto ! Raikitra fa haneho ny talentany ho an’olon-drehetra ry Kala Vazo. Mampanantena seho miavaka rahateo izy telo mirahavavy…
«Kaly Kalo Gasy», lohatenin’ny hetsika ho hita ao amin’ny Espace Tsiky Ivandry taloha, anio hariva, manomboka amin’ny 9 ora alina. Hetsika iray hanasongadinana bebe kokoa ny kolontsaina maha malagasy io, raha ny nambaran’ny mpikarakara. Izay indrindra no antony hanasana an-dRy Kala Vazo, ahitana azy telo mirahavavy samy manan-talenta, hanafana ny lanonana, ampian’i Gothlieb, eo amin’ny fanentanana sy ny fampialana voly.
Hampiavaka ity hetsika ity ny fampiarahana ny fampisehoana amin’ny fiaraha-misakafo ireo nahandro tena malagasy, araka ny fanazavan’ny mpikarakara hatrany. Tena tanjona amin’ny hetsika moa ny hampahafantatra amin’ny rehetra ny zavakanto ataon-dRy Kala Vazo. Ireto farany izay efa manomboka miroso tsikelikely amin’ny sehatry ny matihanina, ankehitriny, ary efa azo lazaina ho mipetraka ihany koa ny anarany.
Araka izany, io no fotoana hanehoan’ izy telo mirahavavy ao anatin’ny tarika ny talentany amin’ny fahaizany mihira sy mitendry zavamaneno. Raha ny fanazavana voaray hatrany, mbola vitsivitsy ihany hatreto ny hiran-dRy Kala Vazo. Noho izany, hamelona sy hikalo ireo hirana mpanakanto hafa izy telo mirahavavy. Azo antenaina ny hampiavaka izany, raha ny fahaizan’izy telo ireo zavamaneno malagasy : ny kabosy sy ny valiha, sns.
Ho an’i Gothlieb manokana, sady hihira ny lehilahy no hanolotra fampihomehezana madinidinika eny anelanelan’ny fotoana. Tena hampiavaka ny fety amin’io ny fiaraha-mihira eo amin-dRy Kala Vazo sy Goth, izay inoana fa andrandrain’ny maro tokoa.